Bonito nemadomasi - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Hove36 maminitsi4 vanhu
Handina kumbobvira ndagadzirira iyi yekubheka neThermomix®. Iyo ndeimwe yeaya madhishi awakatora poindi mupani uye zvinokuomera kuti uedze robhoti. Asi rimwe zuva ndakakurudzirwa uye pandakapedza ndikaona iyo mhedzisiro yakanaka Ndakademba kuti ndisina kuzviita nekukurumidza, kunyanya sezvo isingasvibise kicheni nekumvura.
Zviri nyore kwazvo kugadzira. Iwe unongo fanirwa kuita a yakakangwa hanyanisi uye wedzera bonito pamwe chete nemadomasi.
Iyo yekubheka inokodzera mhando dzese dzechirwere senge celiac kana zai kana lactose isingashiviriri, saka zvinonyanya kubatsira kana tiine vaenzi Zvakanaka, hazvigone kukuvadza chero munhu.
Uye, kunyangwe iri hove, nemadomasi inofarirwa nevakuru nevakuru kunyanya kana iwe uchivashandira nemamwe machipisi kana a chena mupunga wakashongedzwa.
Kudya uku ndomumwe wevanovafanira zvakanaka ma reposados ​​uye zviri nani kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera, ne mamwe mavhenekeri akasimbiswa.
1 Hove yeBonito pamwe nemadomasi
NaThermomix® iyi recipe iri nyore uye inoshanda nekuti haina kusviba kicheni.
180 g hanyanisi
50 g yemhiripiri yakasvibirira
400 g yetamato yakapwanyika
500 g yebhonito (mumatako asina ganda kana mapfupa)
Munyu uye mhiripiri kuravira)
Isu tinoisa mugirazi, hanyanisi, gariki uye mhiripiri uye tinopwanya 4 masekondi, kumhanya 4.
Wedzera mafuta uye fry Maminitsi gumi, kumhanya 10º, kumhanya 100.
Wedzerai tomato uye gadzira Maminitsi gumi, kumhanya 15º, kumhanya 100.
Zvichakadaro, isu tinogadzira tuna tacos. Isu tinoisa shavishavi pane mashizha uye tinowedzera bonito kugirazi. Isu tinoronga Maminitsi mashanu, zana, kuruboshwe, chipunu chinokurumidza.
Patinomisa muchina, tinourega uchizorora kwemimwe maminetsi mashanu uye tinokwanisa kushanda.
Mamwe mashoko - Yekutanga recipe: Mucheka muchena muvaroma
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Celiac, Dunhu Cuisine, Nyore, Lactose isingashiviriri, Zai risingashiviriri, Hove, Mapepa evana
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Hove » Hove yeBonito pamwe nemadomasi
Hukuru, hukuru, hukuru ...
Haitaridzike serakanaka mufiriji zvekare, asi panosvika mwaka ndinozviita kakawanda saizvozvo, muThermo. Zvakareruka, zviri nyore ...
Wanyatsotaura Goi, ini ndinoda bonito uye ndinoda iyi recipe nemapatata angu.
Ndine thx 21 uye hauzive kuti ndinotsamwa sei pandinoona mabikirwo emupunga nezvimwe zvinhu zvaunoshandisa spuni yekumhanya. Pane chero hunyengeri kuitira kuti yangu thx iite zvinhu izvi?
Unogona kuzviita nekuisa shavishavi uye kumhanya 1
Raquel Olivares Murwi akadaro
Ini ndichangobva kuzviita uye ndaisa dengu risina butterfly, ini ndine makumi maviri nerimwe uye ndazviita saizvozvo, zvinoshanda chaizvo. Shamwari yangu yakandiudza kuti ndeye thermomix yekutengesa ndiyo nzira yandakaita nayo.
Pindura Raquel olivares guerrero
Ndichanyora dhishi iri reChipiri, ndichakuudza, Nezuro raive zuva rekuzvarwa kwemwanasikana wangu SANDRA uye ndakamugadzirira keke ine machokoreti matatu uye keke ye caramel ine walnuts uye keke remunyu yaive budiriro huru ... ese mabikirwo ayo Ini ndinogadzira yako, ini ndiripo, enderera seichi GIRLS ... tarisa, ini ndiri Thermomix presenter uye vese vatengi vangu vanovaudza kuti vapinde mubhurogu yako, uyezve ivo vondiudza kuti vanoita maresipi ako, ndinokuudza zvechokwadi , muri VAKURU vaviri ... KUKWazisa NOKUGWARIRA, kune wese munhu .. ..FROM TOMELLOSO
Mari Carmen, ndinofara kuti unofarira makeke zvakanyanya. Iwe uri zuva nemacomments ako kublog.
Kutsvoda kudiki uye makorokoto mazhinji kumwanasikana wako.
Ndakanganwa pandakagadzira keke re caramel nema walnuts, base racho rakagadzirwa senge rine machokoreti matatu ane makuki uye iri rakanaka chose ndinokukurudzira kuti uite keke iri iro, rakanaka kwazvo, rakanaka kwazvoaaaaaaaaaaa …………… tomelloso …………………………………………… Ndinokuonai mazuva ose ……………………………………………
Ndinoda bonito nemadomasi neonion.Ndinogara ndichigadzira mabikirwo aya mugapu reGM, handina kumbofunga nezvekuigadzira mu thermomix.Ndine fungidziro yekuti ichabuda zvakatonaka, zvakareruka kuchenesa. it was not for you, I would not get it. so much party to my th.Ndatenda kune zvese.Greetings.
Ndiri kufara kuti tinokukurudzira kuti upe yako thermomix hwakawanda hupenyu. Zvese zvinobuda zvinonaka, fara uye iwe uchaona kuti munguva pfupi iwe unongoda kubika nazvo. Shuwiro yakanakisa
Ndinoda dhishi iri !!!
Iniwo ndinowanzozviita zvakanyanya asi handimboite mu thermomix, svondo rino ndinozviedza….
Nemusi weChishanu ndakagadzira iyo nhema pudding coca uye yakabuda yakanaka kwazvo, nemabikirwo ako inogara iri chokwadi chakabudirira.
Edza bonito uye utiudze kuti sei pamusoro paElena. Vanoida kumba, ndinovimba unoifarira. Shuwiro yakanakisa
Ngatione kana ndichiiwana yakanaka musupamaketi, pese pandinoshinga kuzviita handi kuiwana. Ndiri kuona kuti Goizalde inotaura nezve mwaka, uye mubvunzo wangu ndewekuti: mwaka we tuna iri rini? Ndotenda zvikuru!!
Pindura kuna Aina
Aina, kunyangwe isu tichigona parizvino kunakirwa gore rese, mwaka we tuna ndiyo zhizha uye mwedzi unopisa kubva Chivabvu kusvika panosvika Gumiguru.
Ndeapi maresipi anonaka, ino yakanaka handigare ndisina kuigadzira, zviri nyore kwazvo.
Iyo nzira yakapfuma uye yakapusa sei, chinhu chega chandinacho therm21, iyo yekumhanyisa chipunu haina iyo. asi ini ndicharatidza, kuva nezvinobuda. ndatenda nemareseji ako.
Maria, iwe unofanirwa kuisa shavishavi uye kuisa speed 1.
Tinowana tuna kumba, ndiri kuzozviita, nekuti chokwadi ndechekuti zvandinoita zvakanyanya zvinhu zvinotapira uye zvekubika kwako unogona zvakare kugadzira zvinhu zvakawanda zvine munyu zuva nezuva asi zvinondipa kakutya uye gara uchipedzisira wavaita nenzira yechinyakare; Ndichaedza uye ndichakuudza.Kwazisai uye ndinotenda zvikuru.
Animate Marisa, iwo mapepeki akareruka uye anonaka. Iyo thermomix haingogadziri chete madhiri, mamwe ese madhishi anobuda zvakanyatsonaka zvekuti zvinoita kuti utaridzike senge super cook. Shuwiro yakanakisa
Ndiri kuenda kuyedza nzira iyi asi pachinzvimbo che tuna ndichaigadzira neecod cod ndinofungidzira kuti ichave yakafanana.Chichava chikafu chamangwana saka mangwana ndinokuudza kwaziso nekutenda
Loli, ini ndinowanzo gadzira recipe yekodhi pamwe nemadomasi ari mune indekisi. Tarisa pazviri nekuti inobuda zvikuru.
Iyi kamukira ndeye kufira! inonaka uye yakapusa nyore !!. Ndatenda!
Ruth ndafara kuti unoifarira !! Ichokwadi ndechekuti yakapusa uye yakapfuma kwazvo. Shuwiro yakanakisa
Mhoroi, munogona kutsiva matomatisi akapwanyika echimango madomasi akaomeswa, erudzi urwu rwehida, saka nguva dzakapfupiswa, handiti?
Kunze kwekugadzira iyi yekubheka ne bonito, inogona kugadzirwa neimwe mhando yehove?
Ini handina kuyedza neimwe, asi bvunza wako anotengesa hove kuti hove dzingaitwe se bonito pamwe nemadomasi, ivo vachatipa zano nenzira inoshamisa uye votiudze zvavanokuudza, ndapota. Shuwiro yakanakisa
Nhasi ndagadzira resipi iyi.Icho chakanaka asi pakunaka kwangu sosi inove mvura yakati wandei.
Makorokoto pane ino yakanaka peji iyo inondibatsira yakawanda.
Nezuro ndakagadzira nzira iyi yekudya kwemanheru, asi pachinzvimbo cheNice ndakaigadzira nekodhi, ndakaisa chilli chidiki mairi ichibva yabuda zvakanaka.Ndanga ndichitya kuti cod ichatsemuka nekuti yaive nyowani, asi yakabuda izere uye zvakaringana. zvakare ndinotenda nemabikirwo ako. kukwazisa.
Mhoroi apo! Ndinogona kupupura kuti mabikirwo aya akanaka chose, ndinofanira kureurura kuti mumba mangu tese tinofarira hove asi handisati ndamboona bonito ine muto wakadai. Makorokoto pane yako blog.
Conchi, ndinofara kuti unofarira. Kumba tinodawo hove asi iyi kunyanya vanasikana vangu vanofarira mbatatisi.
Uku hakusi-kumira kugadzirira zvinonaka zvinhu. Ndagadzira ndiro iyi, inonaka kwazvo. Nezuro ndakaigadzira ndikaisa zvidimbu zvemhiripiri muvaroma uku matomatisi achigadzirwa uye pandakagadzira bonito ndakazviisa mugirazi. Ipfuma zvakare.
Shuwiro yakanakisa. Wakapenga… ..
nuria leiva akadaro
Mhoroi, ini ndiri Nuria, ini ndangoshandisa themomix, asi kubvira pandakaiwana, ndinoishandisa zvakanyanya, ndinoda mapheka ako, maita basa.
Pindura kuna nuria leiva
Mhoroi ini ndiri Maria,
Ndiri kutanga munyika yeThermomix uye ini ndawana yako blog. Izvo zvinoshamisa. Uye mabikirwo acho ari nyore uye akareruka kuita. Ndiri kuda kuzvikurudzira kuti ndiite bonito nemadomasi. Ndine mubvunzo, bonito iri nyowani here, yekutengesa hove?
Kana Maria ari mutengesi wehove, vabvunze kuti vazvionere iwe.
Hukuru !! Kunyangwe ini "ndazvigadzirisa" nekadiki oregano, hmmmm !!!
Ipfungwa yakanaka sei Virginia, ndichaedza oregano. Ndatenda!!
Chii chakarova vasikana, ndinokutendai zvikuru nekuda kweeresipi iyi. Handidi hove zvakanyanya asi ini ndakaita uye ndakagwamba imwe kune rimwe zuva. kunyangwe murume wangu abata zvishoma (uye haafarire hove zvachose).
kutsvoda kukuru uye kuichengeta, ini ndoda yako bolg¡¡¡¡
Ndiri kufara chaizvo kuti wakazvifarira, chokwadi ndechekuti hove yacho yakasarudzika kudaro.
Ana Mazaro Egea akadaro
Ndichazviita kumba mangwana, ndinokuudza kuti zvakamira sei. Makorokoto pane aya maficha akanaka uye rinofadza gore idzva.
Pindura Ana Mazaro Egea
Zvakanaka! Tinofara kwazvo kuti wakazvifarira uye kuti uri kuzodzokorora munguva pfupi. Icho chekare!
Ndatenda recipe yakakura
Kutenda iwe nekugara uripo !!
Inotaridzika zvakanaka kwazvo.
Ini ndaida kubvunza kuti nyangwe madomasi uye bonito achigadzirwa (20 min) tinogona kuisa mbatatisi muvaroma, uye nekudaro tiine ndiro yakazara.
Handizive kana zvinokanganisa kubika.
Pindura kune alleitoo
Ndinofunga izano rakanaka!
Unogona kuisa mbatatisi muvaroma. Hapana dambudziko.
Mubvunzo mumwe wandinayo, kana ukanaka uye mutomatisi uchizonaka? Unokwazisa uye nekutenda.
Zvinoenderana nemari yaunoda kuwedzera. Ukaitarisa, padanho rekupedzisira inokumbira kuti usanganise bonito nemuto, saka kana ukawedzera bhitito uye muto hauzove nedambudziko asi handidi kuwedzeredza mari yacho nekuti ndinofunga kuti zvese zvicha isina kukwana mugirazi.
Sacher makuki ane peach kuzadza